Ndị isi ojii na ihe ndị ha mepụtara | KONGOLISOLO
Ọrịa kachasị njọ: amaghị ama bụ ọrịa kachasị njọ; amaghi ihe ijuanya dika anaghi ekwe omume; ịdị elu bụ mgbe ị maghị ihe ị bụ; anyị na-ama na-eleghara nrigbu ndị nke ya "afọ 3300 tupu ọchịchị Gregorian, nke ahụ bụ ihe ndị Negroes rụzuru"
Site na: KongoLisolona: July 12, 2020 02: 11 Enweghị asịsa
Mma a na n’ọbọ ya (onye ị nwere ike iche n’echiche) bụ nke Touanga Imana, onye nke ọzọ akpọrọ Tutankhamun. Nwere ike ịtụrụ ọrụ ụdị ọrụ nka site na itinye ụbọchị gị…	GỤKWUO
Nke mbu gha bu nke ikpe azu: Ihe ndi isi ojii / nke ndi Afrika abughi egwuregwu nke izo ya na icho; ha gafere nnabata ndị ọzọ niile na-eso ya; na, nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ha ka nwere nnukwu mmetụta na mmepeanya niile taa
Site na: KongoLisolona: June 17, 2020 08: 38 Enweghị asịsa
Onye ọ bụla maara ihe anyị rụzuru, n'ihi na onweghị onye nwere ike ikwu na ọ zụlitere na-enweghị ike ndị isi ojii / ndị Afrịka. Na mgbe anyị gosipụtara na anyị anọwo…	GỤKWUO
Ball dị Nsọ: otu n'ime egwuregwu egwuregwu pụrụ iche nke oge gboo, bụ egwuregwu bọọlụ dị nsọ nke a na-egwukarị na Central America na ndịda United States.
Site na: KongoLisolona: June 11, 2020 05: 21 Enweghị asịsa
Egwuregwu a kwesiri ka ọ nọchite anya akwa dị na mbido, bing bong, ma kpọọ ya nke izizi ihe dị ka afọ 1000 tupu oge Afro-Olmecs bi n'akụkụ mmiri nke Mexico ...	GỤKWUO
Usoro egwu egwu: ndị Africa mara maka cosmos mepụtara egwu ha na ndetu egwu egwu ejiri taa, site na cosmos n'onwe ya site na usoro a na-akpọbu nkwekọ nke spheres.
Site na: KongoLisolona: Mee 5, 2020 05: 05 Enweghị asịsa
Nkowa nke nkwekorita nke uwa nile, n’ebu ihe banyere mbara igwe na egwu, ndi njem Gris na ndi Rome dika Diodorus nke Sicily gosiputara na akwukwo a…	GỤKWUO